मेरो विचार / मेरो ब्लग – This is personal site of Prem Baniya
Category: मेरो विचार / मेरो ब्लग
Posted on December 10, 2013 August 9, 2014 Leaveacomment
एउटा नेपाली युवा सपनाका झिटीझाम्टा बोकेर उज्ज्वल भविष्यको रेखा खोज्दै भीडबीच विदेशिएको हुन्छ । उ हररात सम्झिरहेको हुन्छ स्वदेशको रातो र चन्द्रसूर्यखातिर केही गरौं । ऊ अर्कैको देशमा साश फेरिरहेको हुन्छ, अर्कैको देशमा पाइला चालिरहेको हुन्छ, दिन र दैनिकी उतै विस्तृतमा
Categoriesमेरो विचार / मेरो ब्लग
जब देश ढल्दै जान्छ …
Posted on December 10, 2013 June 15, 2014 Leaveacomment
जब देश ढल्दै जान्छ …शेष त केही रहन्न कि जस्तो हुदैजादोरहेछ ! आप्mनै शरीर पनि त अर्काको हुने हो नि, किन बाँच्नु ? जस्तो हुनेरहेछ । आफ्नो माटो पनि आप्नो रहन्न भने किन दुःख गर्नुजस्तो हुने रहेछ ! यो वायुमण्डलबाट तानिएको अक्सिजन पनि आफ्नो नहुने हो भने केलाई साश फेर्नुजस्तो हुनेरहेछ ! जब देश ढल्दै जान्छ… शेष त केही रहन्नजस्तो हुनेरहेछ ! विस्तृतमा
बन्द : कालो बादलमा कालै घेरा !
Posted on November 26, 2013 December 23, 2013 Leaveacomment
बन्द : कालो बादलमा कालै घेरा !अप्रतिक्षित तर निकै भयपूर्ण प्रवाहित, सोमबारको हामहड्ताललाई सरकारले धेरै हदसम्म आप्mनो नियन्त्रणमा लियो । नेपाल बन्दको गलत संस्कारका बीच एक नजीरस्वरुप सोमबारको बन्दले धेरै हदसम्म लोप्पा खाएको छ । दृश्य यस्तो देखिन्थ्यो कि, अघिपछिका विस्तृतमा